Taliska CXD oo digniin adag u diray Askarta Shacabka dila | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Taliska CXD oo digniin adag u diray Askarta Shacabka dila
Taliska CXD oo digniin adag u diray Askarta Shacabka dila
Taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Generaal Biixi oo maanta la hadlayay ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa digniin adag u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo lagu eedeeyay in ay gudaha magaalada Muqdisho ku dileen dhalinyaro saarnaa Mooto Bajaaj.
Taliyaha ayaa sheegay in ciidanka ay tilaabo adag ka qaadi doonaan askartaasi lana geyn doono tiirka Caddaaladda si looga jaro dhibaatadii ay geysteen.
Waxaa uu sidoo kale uga digay in ay rasaas furaan xilliyada ay marayaan wadooyinka oo mararka qaar ay ciidanka rasaas ku furtaan marka ay xirmaan.
“Habeenadaan waxaa dhacayay falal amni darro ah, Askirigii qof shacab ah xabbad ku rida waxaan geyneena tiirka si loo toogto”ayuu yiri taliyaha.
Ciidanka dowladda ayaa si barer ah u dilay Sakariye Maxamuud Xuseen, Sowda Maxamuud Xuseen iyo Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud xalay iyo habeen hore xilli ay doonaayeen in ay wadooyinka oo mashquul ahaa ay furtaan.
Dhanka Booliska waxay sheegeen in ay gacanta ku hayaan Eedaysaneyaasha oo kala ah Cabdiwaayeel Macallin Aadan iyo Dayax Nuur Cabdi Aadan ayna hadda ku jira gacanta Dowladda, iyada oo la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh.